किन पानीका थोपाहरू फारामहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई के आकार हुन सक्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
किन पानीका थोपाहरू फारामहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई के आकार हुन सक्छ?
जर्मन पोर्टिलो | | Ciencia, Divulgation
निस्सन्देह, तपाईंले कहिले बर्षालाई हेरिरहनु भएको छ, विस्मित भएको छ र यसमा वर्षा वर्षाहरू कसरी झर्छन् भनेर छक्क परेको छ। ड्रपहरू जुन सँधै गोलाकार वा अंडाकार आकारहरूसँग मिल्दछन् र व्यक्तिगत रूपमा तपाईले तिनीहरू खस्नुभएको देख्नुहुन्छ मानौं तिनीहरू सुई जस्तै थिए। पानीका थोपा पानीको पछाडि कुन रहस्यहरू छन्? सानो पानीको थोत्रो सतह मुनि के लुकेको छ र किन पानीको थोपाहरू बन्छन्?
यदि तपाईं यी सबै ईन्ग्मास र शंकाहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, पढिरहनुहोस् 🙂
1 पानीको एक थोपा
2 किन पानीको थोपाहरू गठन हुन्छन्?
3 किन वर्षावहरु आँसुको जस्तो आकारका छन्?
पानीको एक थोपा
पानी पृथ्वीको सतहमा अवस्थित सबै भन्दा सामान्य तत्व हो। पानीलाई धन्यवाद, जीवनले हामीलाई थाहा छ यो विकास हुन सक्छ। यदि उनको लागि छैन भने, त्यहाँ नदी, ताल, समुद्र वा महासागरहरू हुनेछैन। अझ के, हामी बाँच्न सक्दैनौं किनकि हामी 70०% पानीले बनेका छौं।
पानी तीनै राज्यमा फेला पार्न सकिन्छ: ठोस (बरफको रूपमा), तरल (पानी), र ग्यास (पानी वाष्प)। यसको राज्यको परिवर्तन तापमान र दबावमा पूर्ण निर्भर गर्दछ। जब तातो बरफमा लागू हुन्छ, यसको उर्जाले पानी भित्रको अणुहरूको कम्पन बढाउँदछ र यो पग्लिन थाल्छ। यदि यो ताप जारी रह्यो भने, कणहरू यति धेरै अलग हुनेछ कि तिनीहरू ग्यासमा परिणत हुनेछन्। पानीको बाफ तिनीहरू केवल थोरै थोपा पानी मात्र हुन्। तर ...
किन पानीको थोपाहरू गठन हुन्छन्?
जब हामी पानीले बनेको अणुहरूलाई औंल्याउँछौं, हामी गोलाकार आकार हाल्दछौं जुन बलहरू र घुमाएर सँगै राखिन्छ। यदि यो त्यस्तो हो भने, किन पानी चुर्लुम्मै एकल अणुको मोटाइमा फैलदैन? यो भनिन्छ के कारण हुन्छ सतह तनाव। अणुहरूको बीचमा रहेको सतह तनावलाई धन्यवाद, हामी गिलासको माथीमा सियो फ्लोट बनाउन सक्छौं वा जुत्ता लगाउने कीराहरू पानीमा हिंड्न सक्छन्।
यो बुझ्नको लागि, तपाईंले तरल भित्र के भइरहेको छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। पानी अणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यी पनि फलस्वरूप एटम हुन्। प्रत्येक परमाणुसँग सकारात्मक शुल्क (प्रोटोन) र नकारात्मक शुल्कहरू (इलेक्ट्रोन) हुन्छन् र तिनीहरूसँग अणुको प्रकारको आधारमा तिनीहरूसँग एक वा अन्य फारम हुन्छ। कहिलेकाहिँ इलेक्ट्रोन शेल एक अर्कामा बढी आकर्षित हुन्छन् र प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरूमा। त्यसकारण, हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ आकर्षण र घृणाको फोर्सहरू छन्।
जब हामी तरलको अणु अवलोकन गर्दछौं, हामी देख्न सक्छौं कि यो कसरी अझ बढी अणुहरूले घेरिएको छ र सबै अन्तर-अणु शक्तिहरू जो एकअर्कालाई रद्द गर्छन्। यदि एउटा बाँयामा गोली हान्यो भने, अर्कोले उही तीव्रताका साथ दायाँ तान्छ, त्यसैले तिनीहरू एक अर्कालाई रद्द गर्दछन्। यसले अणुहरू बनाउँछ कम ऊर्जा र अधिक स्थिर छन्। न्यूनतम उर्जा लिनको लागि खर्च गर्ने राज्य सँधै खोजिन्छ, तातो के चिसो हुन्छ, के धेरै उच्च झर्छ, आदि।
पानीको सतही तहमा रहेका अणुहरूको अवलोकन गर्दा कुरा जटिल हुन्छ। यी अणुहरू अन्य अणुहरूसँग पूर्ण रूपमा घेरिएका हुँदैनन्। तिनीहरू केवल एक तर्फबाट शक्ति प्राप्त गर्दछन्, तर अर्कोबाट होइन। यो समस्या समाधान गर्न, अणुहरू आफैंले कब्जा गरेको सतह क्षेत्र कम गर्नका लागि एउटा आकार फेला पार्न कोशिस गर्दै उनीहरूको स्थान बदल्छन्। उही मात्राको लागि, सब भन्दा सानो सतह क्षेत्र सहित ज्यामितीय शरीर क्षेत्र हो।
यी सबै कारणहरूको लागि, पानी गोलाकार वा गोलाकार आकारमा खन्याउँदा पानीको थोप्लाहरू गठन हुन्छन्। यही कारण यो हो कि पानीको सतहमा झुकाव हुने भएकोले थोरै द्रव्यमान भएका पानी र पानीभन्दा कम सघन वस्तुहरू (जस्तै मोभी कीराहरू) फ्लोट गर्न सक्छन्। विदेशी शरीर प्रवेश गर्न अनुमति नतोड्नुहोस्।
पानीमा सतह तनाव अरू तरलहरूको तुलनामा बढी हुन्छ किनकि यसको अणुहरूको ज्यामिति कोणीय हुन्छ र यसले गर्दा अधिक शक्तिहरू हुन्छन्।
किन वर्षावहरु आँसुको जस्तो आकारका छन्?
एकचोटि पानीको थोपा पानी किन बनिनुको कारण वर्णन गरिसकेपछि, पानीको बर्षमा आकाशबाट खस्दा यी थोपाहरू किन फाँट्ने आकारको रूपमा लिन्छन्।
प्राय: पानीको अश्रु-आकार ड्रप चित्रण गरिन्छ। जे होस्, जब सम्म यी ड्रपहरू विन्डोमा खस्दैन, यसको समान आकार हुँदैन। सानो रेनड्रपहरू छन् एक मिलीमीटर भन्दा कमको त्रिज्या र आकारमा गोलाकार छन्। सबैभन्दा ठूलाले हेमबर्गर बन्सको आकार लिन्छन् जब तिनीहरू mm. mm मिमी भन्दा अधिक त्रिज्या मानमा पुग्छन्। जब यो हुन्छ, बूँदाहरू प्यारासुटमा विकृत हुन्छन् आधारको वरिपरि पानीको ट्यूब संग र सानो थोपामा फैलन्छ।
पानीको थोपाहरूको आकारमा यो परिवर्तन दुई शक्तिहरूको एकैसाथ अभिनय गर्ने तनावको परिणामका कारण हो। पहिलो हो पहिले देखिएको सतह तनाव र दोस्रो हावाको चाप हो, तह ड्रपको आधार माथि माथि धकेल्न यो भित्र झर्दा। जब पानीको थोपा साना हुन्छ, सतह तनावले हावाको चाप भन्दा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ, जसले गर्दा ड्रपले गोलाकारको आकार लिन्छ। पानी ड्रपको आकार बढ्ने बित्तिकै, यो खस्ने गतिसँगै बढ्छ, जसमा वायुको चापले पानीको थोपामा काम गर्ने बल गर्दछ। यसले ड्रपलाई अधिक सपाट हुन र यसको भित्र एक उदासिनता निम्त्याउँछ।
जब ड्रपको त्रिज्या mm मिमी भन्दा बढि हुन्छ, ड्रपको बिचमा डिप्रेसन यस्तो बढ्छ कि यसले गठन गर्दछ। शीर्षमा पानीको औठी सहितको झोला र यो ठूलो ड्रपबाट धेरै सानाहरू गठन हुन्छन्।
यस जानकारीको साथ, तपाईं पानीको थोपा र उहाँहरू किन ती आकार हुन्छन् भन्ने बारे थोरै जान्न सक्नुहुनेछ जब तिनीहरू फरक ठाउँमा हुन्छन्। अब तपाईं विन्डो मार्फत तत्वको बारेमा अधिक ज्ञानका साथ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीलाई जीवन दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » किन पानीका थोपाहरू फारामहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई के आकार हुन सक्छ?
कसरी र कहिले नर्वेमा उत्तरी उज्यालोहरू हेर्न
बाढी के हो?
तपाईंको ईमेलमा मौसम विज्ञान को बारे मा सबै समाचार प्राप्त गर्नुहोस्।
गठन र अध्ययन